Mexico Oo Diiday In Caruurta Loo Bixiyo Facebook & 12 Magac Oo Aan Lala Bixi Karin Adduunka Oo Idil | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Mexico Oo Diiday In Caruurta Loo Bixiyo Facebook & 12 Magac Oo Aan Lala Bixi Karin Adduunka Oo Idil
Mexico Oo Diiday In Caruurta Loo Bixiyo Facebook & 12 Magac Oo Aan Lala Bixi Karin Adduunka Oo Idil
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 18-07-16 10:11 AM Marka ay timaado inay magac ula baxaan caruurtooda, waalidiinta adduunka qaarkood ayaa la yimaada magacyo qariib ah.
Qaar ka mid ah magacyada ay dadku ula baxaan caruurtooda ayaana waxaa ka mid ah Kimoynce iyo Chandalier.
Laakiin lammaane u dhashay dalka Sweden ayaa dareenka adduunka soo jiitay Isbuucaan markaasoo ay cunugooda ula bexeen FACEBOOK, taasoo keentay in loo diido PASSPORT.
Taasi waxay keentay in dowladda Mexico ay shacabkeeda uga digto in aysan caruurtooda ula bixi karin magacyada aaladaha ay jecel yihiin. Sidoo kale waxaa loo sheegay inaan loo bixin karin caruurta Traffic ama Taraafiko.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa soo jiidasho leh inay dowladda Portugal diiday inay shacabkeedu isticmaalaan niinaasta Tomas laakiin lama bixi karaan Tom.
Waxaa soo raacaya in isticmaalka magaca Pieandsauce laga diiday Australia, halka Sex Fruit oo ah khudaar aad looga jecel yahay dalka New Zealand aan loo bixi karin caruurta dalkaas. Lama bixi kartid 4Real haddii aad sidoo kale joogto New Zealand.
Japan ayaa sidoo kale diiday inay dadkeedu la baxaan magaca Akuma oo micno ahaan loola jeedo Sheydaan. Markale The Termininator lama bixi kartid haddii aad joogto Mexico.